प्रधानमन्त्रीज्यू, यी बुढो किसानको आँ’शुले तपाइँलाई छोएन ? – Khabarhouse
प्रधानमन्त्रीज्यू, यी बुढो किसानको आँ’शुले तपाइँलाई छोएन ?
Khabar house | १८ पुष २०७६, शुक्रबार १४:३९ | Comments
काठमाडौं । ठूलो भरोसा र आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीमा पर्छन्, केपी शर्मा ओली। उनी भ्र’ष्टाचारी, घु’सखोरी, ठ’गी, अ’पराधि वि’रुद्ध र जनताको पक्षमा मिठो र आशा लाग्दो भाषण गर्छन। सबैजनाले उनको भाषण प्रति विश्वास गरेका छन् । उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपाले अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व लिइरहेको छ ।
बहुमत सहितको सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको आशा र भरोसामा हुनु स्वभाविकै हो। तर, जनताको आशा र भरोसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको दुई किसानको तस्विरले प्रष्ट पारिरहेको छ । यी दुई तस्विरले सारा नेपालीको मन दुख्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी तस्विरले छोयो कि छोएन, तर जनताले उनीमाथि गरेको भरोसा र विश्वासमा भने ह्रास आयो ।
चार वर्षदेखिको उखुको करिब साढे एक अर्ब रुपैयाँ चिनी मिलले नदिएपछि ऋणमा डुबेका किसान न्याय खोज्न काठमाडौंमा आएका छन। काठमाडौंको चिसो सडकमै सुतेर न्याय मागेका ति किसानको आँखाबाट खसेको आँशुले प्रधानमन्त्री देखि नेतासम्म, प्रशासन देखि प्रहरीसम्मलाई छोयो कि छोएन, तर आम सर्वसाधारण नेपालीको मन भने दुख्यो । मनमनै रोए, गणतन्त्रको उपलब्धी यही हो भन्ने अनुमान गरे ।
शहीदको बलिदानी शासकको शासन फेर्न होइन शासकमा पात्र फेर्नका लागि रैछ भन्ने जनताले अड्कल काटे । नेता र मन्त्रीलाई आवश्यक पर्दा कानुन रातारात बनाइन्छ, तर जनताको पैसा ठग्ने उद्योगी पक्राउ पर्दैनन। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबाट न्याय नपाए पछि केन्द्र सरकारसँग गुहार माग्न आएका रौतहट र सर्लाहीका किसानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल उनीहरुलाई भुक्तानी दिलाउन नसक्दा आशा र भरोसा भाँचिएको छ ।
पहिलाकै उखुको पैसा नपाएका किसानको खेतमा अहिले लगाइएको उखु पनि सुकेर जान लागेको छ । अनाहकमा उद्योगीबाट पाएको सास्ती व्यहोर्नु परेका किसानलाई न्याय दिन नसक्ने तीन तहकै सरकारले मुलुकको विकासमा आधुनिक कृषिको कुरा गर्नु भाषण सिवाय अरु के हुन सक्ला र । जनताको नाममा राजनीति गरेका नेताहरुले जनताको रगत पसिना चुस्ने ती उद्योगी र व्यवसायीलाई प’क्राउ गरेर का’रबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् ।
एक हप्तादेखि दैनिकजसो काठमाडौंको सडकमा उत्रिएर न्याय माग्दा किसानको आँखाबाट झरेको आँशुलाई नाटकीय नठानियोस् । मुलुकमा बहुसंख्यक किसान छन्, उनीहरु सबै सडकमा उत्रिए उद्योगीको दिनमात्रै होइन, नेताहरुको शासन पनि समाप्त हुन सक्ने तर्फ मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरुले बेलैमा सोच्नु पर्ला ।